~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: May 2013
Regards, witch83 To Continue Reading
Posted by witch83 at 1:25 PM4comments:
Posted by witch83 at 11:40 AM2comments:
ဘုတ်ဆုံမတစ်ယောက် ဒီနေ့ အလုပ်သွားဖို့ နောက်ကျပြန်လေပြီ။
အင်း.. ပြောရရင်တော့ ဒီနေ့မှ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ နေ့တိုင်းလိုလို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နောက်ကျနေတာပါပဲ။ နောက်ကျတတ်တာကိုက ဘုတ်ဆုံမရဲ့ signature တစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပါပြီလေ။ အရင်နေ့တွေကတော့ နောက်ကျရင် တက္ကဆီစီးပေမဲ့ ခုတစ်လော တက္ကဆီစီးရတာတွေများနေတဲ့အပြင် လကုန်ခါနီးမို့ ပိုက်ဆံပြတ်နေတာနဲ့ပဲ ဒီနေ့တော့ mrt ပဲ စီးတော့မယ်။ အိမ်နဲ့ mrt က တော်တော် အလှမ်းဝေးတာမို့ လမ်းကလည်း မလျှောက်ချင်တာကြောင့် ဘတ်(စ်)ကားစီးဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။
"အင်း.. ဘတ်(စ်)ကားက အကြာကြီး စောင့်ရရင်တော့ ဒုက္ခ"လို့ တွေးရင်း အလုပ်နောက်ကျရင် မျက်နှာကြီးစူပုတ်ထားမဲ့ ချစ်မန်နေဂျာမရဲ့မျက်နှာကို မြင်ယောင်ကာ ဘတ်(စ်)ကားဂိတ်ကို ပြေးမတတ် လမ်း လျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။ လူက ကားမှတ်တိုင်လည်းအရောက် ဘတ်(စ်)ကားကလည်းအရောက်မို့ ဝမ်းသာအားရ အပြေးတက်၊ ကားပေါ်ရောက်တော့ ထိုင်စရာ နေရာတွေကလည်းများ.. အင်း ဘုတ်ဆုံမတစ်ယောက် နောက်ကျပေမဲ့ ကံတော့ကောင်းနေသေးသကိုး။ ထိုင်ခုံမှာထိုင်လိုက်တော့ ကိုယ့်အရှေ့က ခုံတန်းမှာထိုင်နေတာက သိပ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူမရဲ့အမေ။ ကောင်မလေးက ကောင်းကောင်းမထိုင်ဘဲ ဆော့နေတယ်။ သဘောကျလို့ သူ့ကို ပြုံးကြည့်နေရာက ကားကမရွေ့လို့ ဘေးဘီကြည့်လိုက်တော့ ကားကမီးပွိုင့်မိနေတယ်။ "ကျွတ်.. နောက်ကျနေပါတယ်ဆိုမှ..."
ဂိတ်ဆုံးတော့ (MRTရှိတဲ့ဂိတ်က ဘတ်(စ်)ကားဂိတ်ဆုံးပါ။) ဆင်းမယ်ဆိုပြီးအထ အရှေ့က ကလေးမလေးက ဝုန်းဆို ထလိုက်ပြီး ခုန်ပေါက်နေလို့ သူတို့သားအမိကို အရင် ပေးသွားလိုက်ပါတယ်။ အရင် ပေးသွားလိုက်ပြီးကာမှ မှားသွားမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ကလေးက ခုန်ဆွ၊ခုန်ဆွနဲ့ ဆော့နေပြီး အနောက်က ဆင်းမဲ့သူတွေကို ပိတ်နေပါတော့တယ်။ အမေလုပ်သူကလည်း သူ..အလျင်မလိုတိုင်း ကလေးကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေပါတော့တယ်။
"အောင်မလေး.. ငါ့နှယ်.. နောက်ကျနေပါတယ်ဆိုမှ။ ဒီသားအမိ အရင်ဦးစားပေးလိုက်တာ ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့ပါရောလား။ အမေလုပ်တဲ့သူကလည်း ဒီအချိန် လူတွေ အလုပ်သွားတဲ့အချိန်၊ အားလုံး အလျင်လိုနေကြတယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား မသိပါဘူး။ အနောက်ကလူတွေကိုမှ အားမနာ။"
သူတို့နှစ်ယောက်အနောက်ကနေ စိတ်ကိုဆွဲဆန့်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းဆင်းလာလိုက်တာ ကားအောက်လည်းရောက်ပြီမို့ mrt ဆီကို အသုတ်နှင်ပြီး ပြေးလိုက်မိပါတယ်။ mrt ထဲဝင်ပြီး စက်လှေကားပေါ်တက်မယ်လုပ်တော့ အဘွားတစ်ယောက် အရှေ့ကပိတ်ပြီး စက်လှေကားပေါ်တက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာနဲ့ ပြေးတာကို ဘရိတ်အုပ်ပြီး အဘွားပြီးအောင် စောင့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဘွားက စက်လှေကားပေါ် တက်ပြီးသွားတော့ ဘယ်ဘက်ကပ်မရပ်ဘဲ ညာဘက်မှာ ရပ်နေပြန်ရော... အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ညာဘက်ကနေတက် ပြီးတော့ လှေကား တဆင့်ထက်တက်၊ ဘယ်ဘက်ပြောင်း၊ အပေါ်ကို ကဆုန်ပေါက်ပြေးတက်ခဲ့တယ်။ (ရထားဝင်လာတာတွေ့လို့)။
အလယ်မှာ ချောင်နေပြီး အဝမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာမို့ လူတွေကို "Excuse Me" နာနာပြောပြီး ရထားအလယ်ထဲကိုတိုးဝင်ပြီး အလယ်မှာ ချောင်ချောင်ချိချိ ဝင်ရပ်နေလိုက်ပါတယ်။ နှစ်မှတ်တိုင်လောက်စီးပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်ရှေ့ကလူထသွားတာမို့ ထိုင်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း အတွေးတွေ နယ်ချဲ့ရင်းက ဘုတ်ဆုံမရဲ့စိတ်တွေ ဟိုးအတိတ်ဆီ ရောက်သွားပါတော့သည်။
" မေမေ.. သမီးလည်း ဗြိတိသျှကောင်စီကဖွင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ချင်တယ်။"
ဘုတ်ဆုံမ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲပြီးသွားလို့ BC က စာကြည့်တိုက်မှာ အိမ်က အသင်းဝင်လုပ်ပေးထားတာကြောင့် စာအုပ်သွားဖတ်ရင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ ကတ်ဆက်ခွေတွေ သွားနားထောင်ရင်း၊ စာအုပ်တွေငှားရင်းက တွေ့တွေ့နေရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အားကျပြီး မေမေ့ကို ပူဆာလိုက်မိသည်။
" အို.. သမီးရယ်.. အခုက ကိုကို တက်နေတယ်လေ။ ဒေါ်လာနဲ့ ပေးရတဲ့ဟာကို။ နှစ်ယောက်ဆို မနိုင်ဘူး သမီးရဲ့။ ပြီးတော့ သူ့ GCE ကျူရှင်လခတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ စာမေးပွဲကြေးတွေလည်း ပေးရဦးမှာ။ ခုလည်း သမီးကို ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ တီချယ်အေးဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ထားပေးထားတာပဲဥစ္စာ။ သမီးက လိမ္မာပါတယ်။ ကိုကို အတန်းတွေအားလုံးပြီးတော့ သမီး တက်ပေါ့။ ဟုတ်ပြီလား။"
အင်းလေ.. ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုကိုပြီးတော့မှပဲ ငါတက်တော့မယ်။ သူလည်း ခု.. upper inter A ရောက်နေပြီပဲဟာ။ ပြီးဖို့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူးလေ။ တီချယ်အေးလည်း ဒီလောက်ကောင်းနေတာပဲဟာ။ တီချယ်အေးကျူရှင်ကအပြန် ကျောက်ကုန်းကနေ (၃၉)ကားကြီးစီးပြီး BCက စာကြည့်တိုက်ကို ပုံမှန်သွား၊ ညီမဝမ်းကွဲဖြစ်သူ BC မှာအတန်းရှိလို့ သူနဲ့အတူ ကပ်လိုက်ရင်လိုက်ရင်းက အကိုဖြစ်သူနဲ့ ညီမဝမ်းကွဲတို့ရဲ့ အတန်းတွင်းအတွေ့အကြုံများကိုနားထောင်ပြီး အားကျရင်းက ဘုတ်ဆုံမတစ်ယောက် အကိုဖြစ်သူ သင်တန်းပြီးမည့် အချိန်ကို လက်ချိုးရေတွက်ရင်းစောင့်နေမိပါသည်။
သို့သော်လည်း upper interတန်းများ ပြီးသည့်အခါ BC မှာ Advanced 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c ဆိုပြီး ပေါ်လာပြန်ပါသည်။ တက်မည့်ကျောင်းသား သိပ်မရှိလို့ Advanced 1b တွင် ထိုအတန်းများကို BC က ရပ်လိုက်ပြန်ပါသည်။ General English အတန်းများ တက်နေရင်းက "Better Writing", "Business English", "Phonetics" အစအစရှိသည့် သင်တန်းများကိုပါ BC တွင်တက်ခဲ့သောကိုကိုသည် Advanced 1b ပြီးသွားသောအခါ IELTS ဖြေမည် ဖြစ်သွားပါသည်။
ဘုတ်ဆုံမတစ်ယောက်လည်း စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းက တက္ကသိုလ်များ ဖွင့်ပြီမို့ ကျောင်းတက်နေတာကြောင့် BCမှ စာကြည့်တိုက်ကိုတောင် တစ်ပတ်တစ်ခါသာ သွားနိုင်တော့ပါသည်။ ကိုကိုကတော့ IELTSကို BC တွင်သာမက.. စတန်လေလှ၊ အီရန်ကာတာ၊ တီချယ်အေးအစသဖြင့် တက်နေပြီး.. GCE 'A' level ဖြေရန် ကြိုးစားနေပါတော့သည်။
"သားရေ... အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းထားပေးဖို့က အရမ်း များလွန်းတယ်။ မင်းအဖေကလည်း အင်္ဂလန်ဆို မဖြစ်နိုင်ဘူး ပြောနေတယ်။ ခါးပြတ်မှာစိုးရတယ်။ နီးနီးနားနား စင်္ကာပူပဲ သွားပါလား။ ဒါဆို မင်းအဖေအဆင်မပြေတော့ရင်တောင်မှ အဒေါ်တွေက ဝိုင်းပံ့ပိုးပေးလို့ ရတယ်။ သား.. ကျောင်းပြီးသွားတော့ အငယ်တွေကို ပြန်ခေါ်ပေါ့"
လို့ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားမတက်သေးခင် ရန်ကုန်က တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှာ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ကိုလည်း လုံးဝလက်မခံသော၊ အမျိုးထဲတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သော၊ တစ်ဦးတည်းသောယောကျာင်္းလေးဖြစ်သော ကိုကို့ကို ကြီးတော်လုပ်သူက အကြံပေးပါသည်။ ကိုကိုကတော့..
"ဟင့်အင်း... သားက အင်္ဂလန်မှ အင်္ဂလန်ပဲ။"
ပာု တွင်တွင်ငြင်းရင်းက ကျမတို့အငယ်တွေကို ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိသော စာရွက်တစ်ရွက်အတွက် မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်တွေမှာ အချိန်ဖြုန်းနေသည်ဟု ဆိုပြန်သေးသည်။
ဒီလိုနှင့်ပဲ.. မိမိမကျွမ်းကျင်သော၊ သူများကိုအားကိုး၍လုပ်ရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ရင်းက မိန်းမသားချည်းသာရှိသော ကျမတို့မိသားစုမှာ တဖြေးဖြေးနှင့် ငွေကြေးအင်အားများ ယိုင်နဲ့လာပါသည်။ တော်သေးသည်။ ကိုကို့ စကား နားမယောင်ဘဲ ကျမတို့တတွေ ထိုစာရွက်များကို ရအောင်ယူခဲ့မိသည်။ ထိုစာရွက်တွေကြောင့် ကျမတို့ ညီအမတစ်တွေ စင်္ကာပူတွင် ငါးပိသံဝဲသော အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောရင်း ဘဝကို တည်ဆောက်နိုင်၊ အိမ်ကို ပြန်ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ကြလေသည်။ စီးပွားရေးမကောင်းသည့်ကြားက ကိုယ်တွေကို ဖြစ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော မိသားစုကိုလည်း အလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
"အင်း.. ဘတ်(စ်)ကားပေါ်က ကလေးလေးနဲ့ စက်လှေကားပေါ်က အဘွားကတော့ အားနည်းတဲ့သူတွေမို့ ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်လေ။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ မိသားစုတစ်စုမှာ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ ဦးစားပေးရမဲ့ အရှေ့ကလူဟာ အားနည်းသူ မဖြစ်သင့်ဘူး။ အားကိုးရလောက်တဲ့သူ၊ မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့သူ၊ ကိုယ့်မိသားစု/ အဖွဲ့အစည်းကို ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်သင့်တယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ သူလည်း အရှေ့ကို မတက်၊ အနောက်ကလူတွေလည်း လမ်းပိတ်နေတော့မယ်။" လို့ အတွေးနယ်လွန်းနေရင်းက ရထားရပ်သွားလို့ မှတ်တိုင်ကို ကြည့်လိုက်တော့...
"အောင်မလေး... ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင်ထက် နှစ်ခုတောင် ကျော်သွားပြီ။ သေတော့မှာပဲ။"လို့ ညီးတွားရင်း ရုံးနောက်ကျလို့ စူပုတ်နေမဲ့ ချစ်မန်နေဂျာမရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်ယောင်ကာ ဘုတ်ဆုံမတစ်ယောက် ရထားပေါ်မှ အမြန် ပြေးဆင်းလိုက်ရပါတော့သည်။ ။
စကားချပ်။ ။ သူများတွေကို အားကျလို့ ဝတ္ထုရေးကြည့်တာ အက်ဆေးလိုလို၊ ဆောင်းပါးလိုလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များ၊ တိုက်ဆိုင်မှုများရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။ ^^
Regards, witch83 (12:03PM; 17/05/2013; GMT+8)
Photo Source; http://lovethepossibility.wordpress.com To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:02 PM5comments:
Posted by witch83 at 6:35 PM 1 comment:
(၂၀၀၀ -၂၀၁၂)ခုနှစ်ကြားမှ Miss Universe များ - ၅ ( နိဂုံးပိုင်း)
အရှေ့ က အပိုင်းတွေကို ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်...
အပိုင်း (၅)မှာတော့ ဒီ Miss Universe ခေါင်းစဉ်ကို ကျန်တဲ့ခုနစ်ယောက်အကြောင်း နည်းနည်းစီနဲ့ MU အကြောင်းနည်းနည်း ပြောပြီး နိဂုံးချုပ်ပါမယ်။MU2001, Denise Quiñones ကနေ စပါမယ်။
* Denise Quiñones (MU2001)ဟာ မယ်စကြာဝဠာလောကမှာ အရမ်းကို strong ဖြစ်တဲ့ ပုရေတိုရီကိုနိုင်ငံက လာတာပါ။ ဒါပေမဲ့ MU2001 ပြိုင်ပွဲဟာလည်း ပူရေတိုရီကိုနိုင်ငံမှာပဲ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ Denise ဟာ မယ်စကြာဝဠာဆုအပြင် Miss Photogenic, Bluepoint Best in Swimsuit နဲ့Clairol Herbal Essences ကပေးတဲ့ Stylish ဆုတွေကိုပါ special awards တွေအနေနဲ့ ရတာပါ။ တကယ်တော့ Oxana Fedorova ဟာ (၂၀၀၁)မှာ ဝင်ပြိုင်ရမှာပါ။ သူ့ကျောင်းစာတွေကြောင့် postphone လုပ်လိုက်လို့ ရုရှားရဲ့ first runner-up က MU2001 ကိုသွားခဲ့ရတာပါ။ Oxana သာ (၂၀၀၁)ခုနှစ်မှာ ဝင်ပြိုင်လိုက်ရင် Denise ရမလား၊ Oxana ရမလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ :)
Denise Crowning Oxana
Oxana & Denise @ MU2002
MU2001 ပြိုင်ပွဲတုန်းက Denise နဲ့ လူတွေ အရမ်းအားပေးကြတဲ့ Miss Greece, Evelina Papantoniou တို့ final top-2 ရောက်ခဲ့ပြီး Denise ဆုရသွားတာပါ။ ကျမကတော့ Denise ကို Evelina ထက် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Deniseဟာ Global Beauties ကပေးတဲ့ အလှပဆုံးမယ်စကြာဝဠာစာရင်းမှာ အဆင့် (၁၄)ရထားပါတယ်။
Denise @ MU2001 Competition
Leila Lopes (MU2011)ဟာ အန်ဂိုလာနိုင်ငံသူပါ။ အန်ဂိုလာနိုင်ငံကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မယ်စကြာဝဠာ သရဖူ ယူဆောင်ပေးတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ MU2011 ပြိုင်ပွဲမှာ MU ဆုအပြင် Miss Photogenic ဆုလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Campus Suffolk တက္ကသိုလ်က စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာဘွဲ့ကို ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Leila ဟာ ဟိုးအရင်ကတည်းက HIV/AIDS ရောဂါသည်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနဲ့ ရောဂါသည်တွေကို ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့အသင်းတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Miss Universe ဖြစ်မှ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ ထလုပ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ Leila ဟာ ရင့်ကျက်သူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ဦးဆောင်ရလေ့ရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Miss Universe တွေထဲမှာတော့ တော်တော်လေးကို ရိုးသားပြီး၊ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ပြောတတ်တဲ့၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချတဲ့ အလှမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ :)))
MU2011ပွဲမှာလည်း Miss Photogenic ဆုက်ု ရခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး သူမဟာ Miss Angola UK, 2010 ဆုကိုလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမ..MU2011 ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာတော့ Miss Angola UKပြိုင်ပွဲကို စာရွက်စာတမ်းအတုနဲ့ ဝင်ပြိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြဿနာတက်လိုက်ပါသေးတယ်။ တရားထဆွဲတဲ့သူက တကယ် တိကျတဲ့ သက်သေမပြနိုင်တာကတစ်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ သုမကလည်း ငြင်းတာကြောင်း၊ ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး သူမဘက်က သက်သေလိုက်တဲ့သူတွေရှိတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဒီကိစ္စပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရတဲ့ဆုက Ideal Beauty ကပေးတဲ့ "Body of the Year, 2011" ပါ။ လက်တလောသတင်းအနေနဲ့ကတော့ Leilaဟာ အမေရိကန် ဘောလုံးကစားသမား Osi Umeniora နဲ့ (၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ စေ့စပ်ခဲ့ပါတယ်။
Olivia Culpo ကတော့ USA ကပါ။ MU2012 ပြိုင်ပွဲကို USA မှာပဲ ကျင်းပခဲ့တာမို့.. Olivia ဟာ တော်တော်လေး အဝေဖန်ခံ၊ အပြောဆိုခံရပါတယ်။ Home Town Factor ဟာ (၂၀၁၂)ခုနှစ်ရဲ့ အလှမယ်လောကမှာ လူပြောအများဆုံးအချက် တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ MU2012 ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ရေးဖူးပါတယ်။ နောက်ထပ်... Olivia နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူပြောများတဲ့အချက်က သူမ အရပ်ပုနေတာပါပဲ။ ၅'၇" လို့ရေးထားပေမဲ့ ၅'၃" ပဲ ရှိတယ်လို့ ကောလဟာလတွေ အရမ်းထွက်ပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိပေမဲ့ Olivia ဟာ တခြားအလှမယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရပ်ရင် သိသိသာသာကို ပုနေပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာ စိတ်ညစ်ပုံရပါတယ်။ Miss Jamaica 2012 ကတော့ Olivia ဟာ ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်ကြီးတွေကို သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အချိန် အကြာကြီးစီးနိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Olivia မယ်စကြာဝဠာ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် သဘောကျမိတဲ့ အချက်တစ်ခုက Nana Meriwethersတစ်ယောက် Miss USA ဖြစ်သွားတာပါ။ လက်ရှိ Miss USA ဟာ Miss Universe ဖြစ်သွားရင် Miss USA (First Runner-Up) ကို Miss USA သရဖူလွှဲပြောင်းပေးရပါတယ်။ sweet ဖြစ်တဲ့၊ classy lady တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Olivia အကြောင်းကိုတော့ အရင်ကလည်း ရေးဖူးတာမို့ ဒီမှာ သိပ်မရေးတော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့.. အခုတစ်လောသတင်းဓါတ်ပုံတစ်ချို့  တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ :)
Amy WyneHouse ပွဲတက်တုန်းက
Screening for Network New York
Olivia and Nana Meriwethers
Miss Russia 2013 ပွဲတုန်းက
Above Photo, From Left toRight: Olivia (MU2012), Stunning Miss Russia 2012 (One of my favourites) , Miss Rusia 2013, Wenxia (Miss World 2013)
Stefania Fernande (MU2009) ဟာ Vanezuela ကပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမဟာ စပိန်၊ ယူကရိန်း၊ ရုရှားနဲ့ ပိုလန်လူမျိုး (၄)မျိုးစပ်ထားတာပါ။ သူမရဲ့ အမေဘက်ကအဖိုးဟာ ယူကရိန်းလူမျိုးဖြစ်ပြီး ရုရှားကို ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၂၀၀၈)မှာ Dayana Mendozaက တစ်ကြိမ်၊ (၂၀၀၉)မှာ Stegania Fernade ကတစ်ကြိမ်နဲ့ Vanezuelaဟာ Miss Universe ဆုကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Miss Universe သမိုင်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ Stefania ဟာ သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Dayanaက သူ့ရှေ့မှာ ဆုရထားတဲ့အပြင် အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် သူမဟာ (၂၀၀၉)အတွက် chance သိပ်မရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ MU2009မှာပွဲမှာ သူမကို အားပေးတဲ့သူ သိပ်မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် MU2009 ပွဲကို ustream က တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတာကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိတ်သတ်တွေဟာ ဒီပွဲကို ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Stefania ဟာ သူမရဲ့ မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်နဲ့ အဝတ်အစားမှာလည်း တော်တော်လေးကို အဝေဖန်ခံရပါတယ်။ ပြီးတော့ Back-to-Back case ကြောင့်လည်း တော်တော်လေးကို အပြောအဆိုခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမဆုရသွားတုန်းကလည်း Dayana နဲ့ သူမ ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် ပျော်ရွှင်နေတာကလည်း ကြည့်ရတာ သိပ်အမြင်မတင့်ပါဘူး။ အရေးထဲမှာ Dayana က MU သရဖူကြီးကို ပြုတ်ကျအောင် လုပ်လိုက်သေးပါတယ်။ :(
လူတွေဆိုတာ ပြောလိုက်ကြတာလွန်ရော။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ။ (အခုလည်း Olivia ကို ရစရာမရှိအောင် ပြောနေကြတာပဲလေ။သရဖူပြုတ်ကျလို့ ကံဆိုးတော့မယ်ဆိုတာတောင် ပါသေး။) ဒီ back-to-back ကိစ္စကို MU ပရိတ်သတ်တော်တော်များများဟာ Miss Universe organization ကို စာတွေ၊ email တွေနဲ့ ကွန်ပလိန်းတက်ကြပါတယ်။ နောက်တော့ MU orgianzaion ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Paula Shugart က ဒိုင်တွေရဲ့ အမှတ်စာရင်းကို ထုတ်ပြပြီး စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ Miss Universe သမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဒီလို လုပ်ဖူးတာပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်ပဲလည်း လုပ်ပေးဖူးပါတယ်။
သူမရဲ့ MU reign ကာလအတွင်းမှာလည်း Stefaniaဟာ အစကတည်းက အဆင်မပြေပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ သွားရိုက်တဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြောင့်ပါ။ အဲ့ဒါအပြင် သူမရဲ့ချစ်သူကိုလည်း လူသတ်မှုနဲ့ သံသယရှိလို့ အစစ်ခံရပါတယ်။ အစစ်ခံရချိန်မှာ သူမရဲ့ချစ်သူဟာ Vanezuela မှာ မရှိနေပါဘူး၊ သူမနဲ့အတူတူ New York မှာရှိနေပါတယ်လို့ အလီဘိုင်ယူတာကြောင့် မယ်စကြာဝဠာတစ်ယောက်အနေနဲ့ Stefania ရဲ့ image ဟာ တော်တော်လေးကို မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ လတွေကြာလာတဲ့အထိ လူတွေရဲ့အားပေးမှုကို မရတဲ့အခါ သူမရဲ့ဒီဇိုင်နာက သူမကို ဆံပင်ညှပ်လိုက်ဖို့၊ ပုံစံပြောင်းဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဆံပင်ပုံပြောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ငယ်သွားတဲ့အပြင် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတာကြောင့် လူတွေဟာ သူမကို လက်ခံလာကြပါတယ်။
Who says, she doesn't deserve the crown?
Stefania at Miss Indonesia Competition
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေ အားမပေးတဲ့ကြားက၊ အဝေဖန်အတိုက်ခံတွေကြားကနေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထူမပြီး အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့လို့ သူမကို လေးစားမိပါတယ်။ Stefania ကို လူတွေရဲ့အားပေးခြင်း မခံခဲ့ရတာကြောင့် Vanezula သမ္မတဟာ သူမကို တော်တော်လေးကို အထောက်အပံ့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း အရမ်းကို အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ MU2010 ပွဲမှာ ပိုပြီးလှလာတဲ့ Stefaniaဟာ MU2009 အနေနဲ့ နောက်ဆုံး fareware walk ကို လမ်းလျှောက်ရတဲ့အချိန်မှာ Venzula အလံဟောင်းကို ကိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ( အလံသစ်ဟာ ကြယ်ရှစ်လုံးရှိပြီး အလံဟောင်းကတော့ ကြယ်ခုနစ်လုံးပဲ ရှိပါတယ်..) သူမရဲ့ အမူအယာဟာလည်း တကယ်ကို လေးနက်လွန်းပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ဟာ လူတွေ အခုချိန်အထိ သူမကို အားပေးစေတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကို ရခဲ့တဲ့အပြင် ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေကလည်း သူမကို ပိုလေးစားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေက သူမကို Beauty withacourage လို့ ဆိုကြပါတယ်။ Stefania ဟာ MU reign ပြီးမှ ပိုပြီး အောင်မြင်လာတဲ့ အလှမယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Stefania with her old National Falg
( စကားချပ်။ ။ အခုလည်း Stafaniaဟာ Donald Trump ရဲ့ offer ကို လက်မခံဘဲ သူမနိုင်ငံသူမ ပြန်သွားလို့ လူတွေက သဘောကျနေကြပါတယ်။ MU organization ကို ဝယ်ထားတဲ့ Donald Trumpကို လူတွေ တော်တော်များများက မကြိုက်ကြပါဘူး။ နှစ်တိုင်းကျင်းပတဲ့ မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ သူသဘောကျတဲ့ အလှမယ်တွေကို စာရင်းလုပ်ပြီး ဒိုင်အဖွဲ့ကို ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ list ကိုလည်း ဘယ်သူမှ သေချာမသိရပါဘူး။ မနှစ်ကလည်း Miss USA Pennisula နဲ့ အမှုဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်။ အမှတ်တွေကို သူ့သဘောနဲ့ပြင်တယ်ဆိုပြီး သူမကပြောလို့ ဒေါ်နယ်က သူမကို တရားဆွဲပါတယ်။ ဒေါ်နယ် နိုင်သွားပါတယ်။ နောက်ပြီး Donald Trump ဟာ အလှမယ်တွေကို ဟိုကိုင်၊ဒီကိုင်လုပ်ရတာနဲ့.. ပါးနမ်းရတာနဲ့ နည်းနည်းလေးမှ ethics မရှိပါဘူး။ တကယ်ဆို ကျမသိသလောက်ပြောရရင် အမေရိကားမှာ ပါးချင်းကပ်တဲ့အလေ့ မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး Oxana တစ်ယောက် MU2002 အဖြစ်က နုတ်ထွက်လိုက်တာလည်း ဒေါ်နယ် မဟုတ်တရုတ်လုပ်လို့ဆိုပြီး လူတော်တော်များများက ပြောကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်နယ်ဟာ အလှမယ်တွေအပေါ်မှာ လူမြင်ကွင်းမှာတောင် အသားယူတတ်တယ်ဆိုတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။)
Ximena Navarrete (MU2010)ကတော့ မက်ဆီကိုနိုင်ငံကပါ။ မက်ဆီကိုနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် သရဖူယူဆောင်ပေးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်ကို တော်တော် ဝတ်တဲ့ အလှမယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ siganature color လို့ ပြောရင်တောင် ရပါတယ်။ သူမဟာ sweet & classy lady တစ်ဦးပါပဲ။ လှပေမဲ့ အရပ်ပုပါတယ်။ ကိုယ်လုံး သိပ်မလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူမကို အားပေးတဲ့သူ တော်တော်များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယကို နှစ်ပတ်သွားလည်စဉ်က အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာတွေကို သူမကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပလိန်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တစ်ချို ( အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယက ပရိတ်သတ်တွေက) သူမကို မကြိုက်ကြတော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ Ximena ဟာ MU2012 ရဲ့ ဒိုင်အဖြစ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Justin Pasek (MU2002) ဟာတကယ်တော့ first runner-up ပါ။ Oxana တစ်ယောက် MU ရာထူးကနေ နုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက် သူမ Miss Universe ဖြစ်လာတာပါ။ လှတာတော့ လှပါတယ်။ ပနားကအလှမယ်ပါ။ ပနားမားဟာလည်း အဲ့ဒီ (၂၀၀၃)ခုနှစ် တစ်နှစ်ပဲ ဆုရဖူးပါတယ်။ လူတွေဟာ Oxana ကို အရမ်းအားပေးတာကြောင့် Oxana နုတ်ထွက်သွားချိန်မှာ Justin ကို သိပ်ပြီး အားမပေးကြပါဘူး။ Oxana တစ်ယောက် မယ်စကြာဝဠာရာထူးက နုတ်ထွက်တဲ့ (၂၀၀၂)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့ဟာ လူတွေကို တော်တော်လေးကို တုန်လှုပ်စေပါတယ်။ သူမ ရာထူးက နုတ်ထွက်သွားပေမဲ့ Miss Universe Organization ကလွဲရင် လူတော်တော်များများဟာ MU2002 ဟာ Oxanaပဲဖြစ်တယ်လို့ လက်ခံကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပနားမားအစိုးရက Miss Universe 2003 ပွဲကို ပနားမားမှာ လက်ခံကျင်းပပြီး သူတို့အလှမယ်ရဲ့ role ကို မြှင့်ပေးပုံ ရပါတယ်။ တကယ်တော့ Justin ဟာ လှပါတယ်။ first runner-up ဖြစ်ပြီး သူများနုတ်ထွက်မှ မယ်စကြာဝဠာရာထူးကို ရတာရယ်၊ Oxanaကို လူတွေ အရမ်းအားပေးတာရယ်ကြောင့်သာ သူမ အရောင်မှိန်ခဲ့တာပါ။
Donald Trump Crowning Justin Paske
Oxana visiting Panama
Justin asanew MU2002
Even as the first runner-up, she was the Country's pride
Zuleyka Rivera (MU2006)အကြောင်းကတော့ အပိုင်း(၁)မှာ ပြောဖူးပါတယ်။ ကျမ မကြိုက်ဆုံး မယ်စကြာဝဠာပါ။ ပူရေတိုရီကိုကပါပဲ။ (၂၀၁၃)နှစ်အစပိုင်းတုန်းကရခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းကတော့ သူမ ကွာရှင်းတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သားကလေးကိုတော့ သူမက ထိန်းသ်ိမ်းစောင့်ရှောက်မှာပါ။
Zuleka Rivera အကြောင်းပြောပြီးသွားရင်တော့ မယ်(၁၄)ယောက်လုံးအကြောင်းပြီးပါပြီ။ ဒီ(၁၄)ယောက်ထဲမှာ ...
~~ Oxana ဟာ လူတွေ အရမ်းအားပေးခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး Stefaniaဟာ တော်တော်ကို အဝေဖန်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
~~ Amelia (2003)ကစလို့ Rio Mori(2007)ခုနှစ်အထိကို MUဟာ fierecd era ( fierced beauty queenတွေ အောင်မြင်မှုရတဲ့နှစ်)လို့ သတ်မှတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သွေးအေးလာပြီး Ximenea (2010)နောက်ပိုင်းကိုတော့ sweet era လို့ လူတွေက သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
~~ MU2004ဖြစ်တဲ့ Jennifer Hawkins ကတော့ မယ်စကြာဝဠာဖြစ်ပြီး သိပ်အကြာခင်မှာ အော်ဆီက ကုန်တိုက်တစ်ခုမှာ catwalk လျှောက်နေတုန်း စကပ်လိုပတ်ထားတဲ့ ပိတ်စပြုတ်ကျပြီး အရှက်ကွဲဖူးပါတယ်။ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကွယ်ပြီး စင်အနောက်ကို ထွက်ပြေးတာ တန်းနေတာပဲ။ :D အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့် Jennifer ကို တော်တော် လူသိများသွားပါတယ်။ သူ့နာမည်နဲ့ Google Search Result တွေ မတရားထိုးတက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာတော့ Jennifer ဟာ ရုပ်မြင်သံကြားကနေတဆင့် လူတွေကို တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်ထားမိရင်ကောင်းမယ်လို့လည်း ရယ်ရင်း ပြောပါသေးတယ်။
~~ MU2008, Dayana Mendoza ဟာ လက်ဝတ်ရတနာကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် အဝတ်အစားတွေမပါဘဲနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကွယ်ပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံဖူးပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်သွားပြီး နောက်ဆုံးတော့ MU organization က သူမကို တရားမစွဲဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စပြီးလို့ သိပ်မကြာခင်မှာ Jennifer Hawkins ကလည်း မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကို လှုဖို့အတွက်ဆိုပြီး အလားတူ nakedပုံတွေကို အရိုက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Positivie attitude to body imageဆိုပြီး အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၇)နှစ်မှာ ယောကျာင်္းလေးမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုက သူမကို nakedပုံ ရိုက်ချင်လို့ တောင်းဆိုတုန်းကတော့ Jenniferဟာ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၀ -၂၀၁၂)ခုနှစ်ကြားမှ Miss Universe များအကြောင်း ဒီတွင် ပြီး၏။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားနေရတာရယ်၊ ရုံးမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာရယ်တွေကြောင့် ဒီပို့(စ်) နည်းနည်း ကြာသွားပါတယ်။
Thank you for reading these posts. ^^
Regards, witch83 (07/05/2013; 2:55PM; GMT+8)
Posted by witch83 at 2:53 PM No comments: